हामीले नेपालीको भावनामा चोट पुर्‍याएका छौं इज्जत साथ भुमी फिर्ता गरौ”: भाजपा वरिष्ठ नेता…हेर्नुहोसl – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
हामीले नेपालीको भावनामा चोट पुर्‍याएका छौं इज्जत साथ भुमी फिर्ता गरौ”: भाजपा वरिष्ठ नेता…हेर्नुहोसl
काठमाडौं– सी,मा समसुआका कारण नेपाल-भारको सम्बन्ध निकै ज,टिल मोडमा पुगेको छ । बरत्मै पनि जानकार र नेताहरू दुई भागमा वि,भाजित भएका छन् । कतिपयले नेपाललाई हेपेकै का,रण यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् भने कतिपयले चीनले नेपाललाई उचालेको बताएका छन्` ।
यस्तैमा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपा’लको समर्थन गर्ने बोलेका छन् । उनले देशको विदेश नीति ख,राव भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्।`
भारतको हालको विदेश नीति अत्यन्तै ग,लत भएको भन्दै नेपाल र भारतबीच कालापानीमा देखिएको पछिल्लो वि,वादलाई लिएर स्वामीले भारतको विदेश नीतिलाई नयाँ शिराबाट फेरि स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।भर्खरै नेपालको संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको नक्शाको विषयमा उनले नेपालले भारतको भूमिमा दा,वी गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने भन्दै भारतले नेपालीहरुको भावनामा चोट पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्`।
स्वामीले ट्वीटरमा भारत सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘नेपालले कसरी भारतीय भूभागलाई आफ्नो भनेर सोच्न सक्छ? के कुराले उनीहरूको भावनालाई चोट पुर्‍याएको छ? जसका कारण भारतसँग सम्बन्ध तो,ड्न चाहन्छन्? के यो हाम्रो असफलता होइन? विदेश नीतिलाई पुनरावलोकनसहित फेरि स्थापित गर्न आवश्यक छ`।
यस्तैमा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालको समर्थन गर्ने बोलेका छन् । उनले देशको विदेश नीति ख,राव भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्`।
Previous तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ? भनेर ओलीले गौतमलाई भने…हेर्नुहोस l
Next अब हाम्रो भुमीमा बसेका भारतीय सेना हटाउने कार्य तुरुन्त होस् :चर्चित सञ्चारकर्मी रबी लामीछाने